दबाबमा पिल्सिएको महिला नेतृत्व अनि साना मरिन !
बिहिबार, असोज ७, २०७८ ०३:०९:३७ युनिकोड
सोमबार, जेठ ३१, २०७८ Dhading Sanchar
धादिङ,३१ जेठ ।
एउटि महिला उमेर मात्र ३४ अनि कुनै बिकसित राष्ट्रको प्रधानमन्त्री सुन्दा कतिलाई रमाइलो लाग्छ त कतिलाई अचम्म पनि । तर लक्ष्य बोकेर साहसका साथ हिड्दै जादा गन्तव्यमा अवश्य पुगिन्छ भन्ने एउटि सफल महिला प्रम साना मरिनको कथाले प्रष्ट पार्दछ ।
समलिङ्गी परिवारमा गरिबिको प्रभाव अनि समाजको अपहेलना उत्तिकै त्यसै बिच परिवारमा एउटि छोरि साना मरिनको जन्म सन १९८५ नोभेम्बर १६ मा फिनल्यान्डको हेलसिन्कीमा बसोबास गरिरहेका परिवारमा झन जिम्मेवारी थपियो। समलिंगी भएकै कारण उनको आमाले समाजमा एउटा चुनौतीसङ्ग लडेर उनलाई हुर्काइरहेका थिए।
सन १९९७ मा त्यो समाजमा सधैको लडाई र अपहेलना सहन नसकेपछी छोरिलाई लिएर उनिहरु पिर्केला बसाई गए। जहाँ सानालाई सरकारी स्कुलमा पढाइयो र बस्नको लागि सरकारी अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट दिइएको थियो। जतिबेला उनी जम्मा १२ वर्षकि थिइन। तर त्यहा र उनको स्कुलमा पनि उनको आमाको विषयमा धेरैले प्रश्न गर्थे उनी जवाफहिन थिइन धेरै संघर्षपुर्ण थियो यी आमा छोरिको जीवन । एकातिर आर्थिक चाप त अर्को तिर सामाजिक अवहेलना तर भनिन्छ मान्छेले आफ्नो कमजोरिलाई शक्तिमा बदले सन्सार जितिन्छ । त्यसपछी सानाले समलिंगी कै विषयमा सामाजिक लडाइ सुरु गरिन ।
उनिले सन २००१मा जब हाइस्कुल अध्ययन सुरु गरिन दिउँसोमा बेकरिमा त कहिले पत्रीकाको बेचेर बिहान कलेजको खर्च जुटाउन थालिन भने कलेजमा पनि विद्यार्थि राजनितिलाई अगाडि बढाउदै गइन । उनले आफ्नो परिवारमै पहिलो पटक युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेकी थिइन। विद्यार्थि राजनितिको अग्रसरता अनि सामाजिक अभियानको कौशल्यताम उनको पोख्तता देखिदै जान थाल्यो । सबैले उनलाई एक निडर तथा कुशल महिला राजनितिग्यको रुपमा चिन्न थाले।
यसैबिच सन २००६मा जब उनी २१वर्षकी थिइन उनले आफ्नो करियरको पहिलो राजनितिक प्ल्याट्फर्म भेट्टाइन सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टिको युथ सङ्गठन एस डि पि युथ, जसमा आवद्द भएर उनले युवा राजनितिक तौर तरिका बटुल्न थालिन । सन २००८मा उनले एस डि पि युथको साङ्गठनिक निर्वाचनमा उम्मेद्बारी दिइन तर नतिजा उनी असफल भइन।
उनले त्यस हारलाई ठूलो कमजोरी सोचेर अझ धेरै अध्ययन र राजनिती केन्द्रित हुन थालिन । उनको राजनितिक तरिका बाट प्रभावित भएर सन २०१२मा उनलाई ताम्पेरे नगरको नगर सभाको निर्वाचनमा टिकट दिइयो र उनी त्यस नगर सभाबाट बिजयी भइन। औधोगिक शहरको नगरप्रमुख भैसकेपछी उनिमा थुप्रै जिम्मेवारी थिए।
त्यसमा पनि मुख्य जिम्मेवारी थियो मजदुरको माग र त्यसको सहजीकरण उनले एउटा कुशल रणनीति पदर्शन गरेर मजदुर आफ्नो पक्षमा बनाइन। त्यतिबेला २७वर्षको एउटि युवती यति सफल होलिन कसैले सोचेका पनि थिएनन किनकि प्राय त्यो उमेरमा युवतीहरु आफ्नो पढाइ सकाएर रोजगारी गरिरहेका र वैवाहिक भविस्यका अन्यौलमा परिरहेका हुन्छ्न तर उनी फरक थिइन।
सन २०१४सम्म उनले आफ्नो पार्टिमा राम्रो छ्बी बनाउन सफल भैसकेकि थिइन । जसकारण उनलाई पार्टिले द्वितीय महिला उपाध्यक्षको जिम्मा दिइयो।।करिब एक वर्ष पछिको निर्वाचनको निमित्त उनले एसडिपि पार्टिमा नया नया एजेन्डा र रणनीति पेश गर्दै गइन ।
सन २०१५मा फिनल्यान्डमा २००सिटको सम्सदिय निर्वाचन भयो जसमा सनाले भारी मतान्तर सहित बिपक्षी पार्टिलाई हराउन सफल भइन।।अब उनको चर्चा पुरै फिनल्यान्डमा हुन थाल्यो। पार्टिभित्र जिम्मेवार नेतृत्व बहन गर्दै उनी जनतामा पनि लोकपृय बन्न थालिन। उनले सरकारी सुबिधाको सुधार र मजदुरको पारिश्रमिकको विषयमा सदनमा नया नया एजेन्डा पेश गर्न थालिन।
सन २०१९मा फेरि फिनल्यान्डमा सम्सदिय निर्वाचन सम्पन्न भयो र सना बिजयी भइन । ६जुन २०१९मा उनले प्रधानमन्त्री एन्टि रिनेको सरकारमा यातायात तथा सन्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरिन। एन्टि रिने एस डि पिका अध्यक्ष पनि थिए र प्रधानमन्त्री पनि तर उनले मजदुरको तलब कटौतिको नियम जब ल्याए फिनल्यान्डमा चौतर्फि बिरोध भयो अनि उनलाई साम्सदले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गर्यो। त्यतिबेला सम्म ५पार्टिको गठबन्धनमा सरकार निर्माण भएको थियो । अन्य पार्टिले उनलाई हटाएर प्रममा साना मरिनलाई राख्ने र मजदुर हड्ताल उनले मात्र रोक्न सक्ने प्रस्ताव राखे अन्तमा ८ डिसेम्बर २०१९मा उनी फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्री भइन ।
भनिन्छ एउटा पुरुषको सफलताको पछाडी एउटि नारिको हात हुन्छ त्यसरी नै नारिलाई पनि साथ र हौसला दिने पुरुष भयो भने धेरै सफल बन्न सक्छिन भन्ने उदाहरण हो साना मरिन। यसरि राजनितिमा अघि बढ्न उनलाई पारिवारिक स्वतन्त्रताले पुर्ण साथ दियो। पछिल्लो निर्वाचनमा उनको पतिले एउटा ट्विट गरेका थिए “साना तिमिले हजारौ जनताको चिन्ता गर २२ महिने हाम्री छोरिको चिन्ता मलाइ जिम्मा देउ” यसले उनलाई प्रम बन्दासम्म परिवारले कसरी साथ दिए प्रष्ट हुन्छ। यो सङ्गै उनी फिनल्यान्डकि तेस्रो महिला प्रम बनेकी हुन। फिनल्यान्डमा अहिले उनको गठबन्धनको सरकारमा रहेका ५मध्य ४पार्टिमा महिला प्रमुख छन। फिनल्यान्डमा ४७% साम्सद महिला छन् ।
अब सोचौ त अवसर र सामाजिक साथ सहयोग हुने हो भने ३४वर्षमा बिहेबारि गरेर कोहि गाउमा दाउरा घाँस त कोहि सहरमा जागिर खाएर बसेका हाम्रा चेलिबेटी पनि कुनै समय राज्यको प्रमुख पदमा बस्न पाउलिन त? स्थानिय निर्वाचनमा महिलालाई धेरै क्षेत्रमा उपाध्यक्ष दिइयो किनकी सबैले सोचेका छन कि प्रमुख पद महिलाले सम्हाल्न सक्दिनन। यस्ता भ्रामक सोच राखेकाले आज पनि महिला राजनितिबाट कोसौ दुर बसेर पुरुष सिर्जित राजनीतिक समस्याको पिडित भैरहेका छन् ।
महिला राष्ट्रपती भएको राज्यमा महिलालाई उचित शिक्षा र राजनितिमा अग्रसर गराउन नसक्दा अधिकांस महिलाले सामाजिक उत्पिडना पनि उत्तिकै सहन परेको छ । महिला नेतृत्वमा राजनीति गरिरहेका नेतृहरुलाई किन उच्च पदमा पुग्न समय लाग्छ ३३% भनिए पनी मन्त्रालयमा किन १ या २ जना महिलाले मात्र जिम्मेवारी पाइरहेछन् । तपाईं हाम्रै वरपर पनि महिला दिदिबहिनी जो कुशल नेतृत्व गर्न सक्छ्न आजपनि पारिवारिक दबाब र यो समाजको आलोचनाको डरले मौन छ्न् मन्त्रालयमा कलम चलाउन सक्ने आजपनि पारिवारिक दबाब र यो समाजको आलोचनाको डरले मौन छ्न।
मन्त्रालयमा कलम चलाउन सक्ने हातहरु गाउमा करौती चलाएर बिताइरहेछ्न। नेतृत्वको धोकोलाई चोयाको डोकोले रोकि रहेछ्न। बजेट बाड्ने हातहरु खाना बाडेर बस्नु परेको छ। सृष्टि सिर्जना गरेकी नारी राज्य सिर्जना गर्न सक्दिनन ? त्यसैले अब घरको ढोका कुरेर बस्ने होइन चेली मन्त्रालयको ढोकाले तिमिलाइ पर्खिरहेछ अब कुन्ठित भएर होइन साहसी भएर अघि बढ राज्यले तिमिलाई नै कुरेको हुनसक्छ !
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३१, २०७८